Ungathola ilayisense yakho ye-drone pilot ngqo kunoma yisiphi isikole sokushayela | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ungathola ilayisense yakho yokushayela i-drone ngqo kunoma yisiphi isikole sokushayela
Esinye sezicelo ezinhle ezenziwa ngumphakathi wabashayeli bezindiza ukuthi ekugcineni kunqunywe ukuthi hlobo luni lomzimba olungafakazela ulwazi lwakho nolwazi lwemithethonqubo ehlukene ekhona maqondana nokusetshenziswa kwama-drones. Kusobala ukuthi usevele uneziphakamiso ezithile ukuze kube ngezakhe izikole zokushayela lezo ezinganikela ukuqeqesha abashayeli bezindiza bezindiza besikhathi esizayo ukufezekisa lokho, ngemuva kokuphothula le nkambo, abasebenzisi bangathola isitifiketi sabo esisemthethweni esibaqeqesha njengomshayeli wendiza ye-drone yi-State Agency for Aviation Safety (AESA).
Kuleli qophelo, kuhle ukugqamisa umsebenzi omkhulu owenziwa yiSisekelo seNational Driving School Confederation ukuze ekugcineni kube njalo ngokubambisana neSalamanca Driving School Association. Njengoba kwamukelwa ULuis Rodero, ongumongameli wamanje weSalamanca Driving School Association, iningi lezikhungo zaseSalamanca zikucabangisisa ukuqala ukwethulwa kwe izifundo ezisemthethweni zokuqeqeshelwa ama-drone opharetha, lapho noma ngubani onentshisekelo angaba ngumshayeli wendiza oqeqeshiwe.
ISalamanca Driving School Association ikubheka ngokungathi sína ukukwazi ukunikeza izifundo ezisemthethweni zokuba ngumshayeli wezindiza okhokhelwayo
Ukungena emininingwaneni ethe xaxa, ngikutshele ukuthi namuhla lolu hlelo luzungeza ukuqeqeshwa kwabashayeli bezindiza be-drone abanamandla okulawula amadivayisi anesisindo esikhulu ngaso sonke isikhathi okufanele sibe ngaphansi kuka 25 amakhilogremu. Sikhuluma ngenkambo ezohlala phakathi kwenyanga eyodwa kuya kwezimbili, isikhathi lapho kuzofakwa khona isikhathi sokuqeqeshwa.
Ngeshwa, sikhuluma ngesiphakamiso esisodwa kuphela, yize ngokwami ​​kufanele ngivume ukuthi into elula njengokuthi isivele isihambele phambili ngokwazi ukuthi le nkambo ingaba nentengo ebabazekayo. kuzoba cishe ngama-800 kuya kuma-900 euros. Kulinganiselwa ukuthi noma yimuphi umshayeli wendiza ye-drone kumele athathe izifundo ezijwayelekile kanye nezinye eziqondiswe ekusetshenzisweni okuzonikezwa i-drone emikhakheni ehlukene.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » Ungathola ilayisense yakho yokushayela i-drone ngqo kunoma yisiphi isikole sokushayela
Uyazi ukuthi i-drone ingashintshwa ngemibhalo ye-3D? Ngisebenzisa iBhubesi 2 futhi ngifuna ukwenza iphrojekthi yokuvelela ngalokhu